Ogaden News Agency (ONA) – Ku-titri Ku-teen iyo ma maqashay !!
Ku-titri Ku-teen iyo ma maqashay !!
Posted by ONA Admin	/ August 31, 2013
Inkastoo halgamaaga JWXO iyo inbadan oo ka mid ah shacbkeena ay la socdaan xogta dhabta ah ee dalka iyo dadka, hadana ku dagaalanka gumaysiga ishaacaadka (ku-tiri ku-teen) waxay ahayd mid isa soo tareysay labadii sanee ugu dambaysay. Waxaa sidoo kale garab socday dhalan-rogga wararka oo si ulakac ah loo soo gaadhsiinayay dadweynaha dibadda ku nool, warkaasoo maalma ka dib sida dhaqanka aadanaha ahba siyaaba kale iskusii badbadala.
Arimahaa ku-tiri ku-teenta ah iyo dacaayadaha jahawareerinta, waxaa haga xafiis uu ku leeyahay sirdoonka Itobiya magaalada Jigjiga oo u xilsaaran arimahan si toos ahna u abuura ku-tiri ku-teenta iyo habkii loo suuqa galin lahaa. Inta bandanna waxay adeegsadaan dad la soo qafaalay ama ay ka xidhan yihiin eheladooda oo magaalada yimid, kuwaasoo la faro inay la haldlaan qof ama dhowr ka mid ah ah ehelaooda oo dibadda jooga, iyagoo loo sheegayo ereyada la rabo in la gaadhsiiyo dibadda.
Tusaale ahaan; waxaa dhacday in tuulo ay soo galeen dhowr Naftood-hure oo dadkii tuulada ay la joogaan, qaarkoodna ay wax ka iibsanayaan ay maqleen kuwa daba-qoodhiga tuulada ka mid ahaa. Way isqabteen inay aadaan iyo inay ka joogaan. Midkii horjoogaha u ahaa oo waliba dhowr jeeroo horena dagaal lasoo galay Naftood-hurayaasha oo la yaqaano ayaa soo aaday. Isagoo caytamaya oo N/hurayaasha haaraamaya ayuu dadkii u yimid ka dib gooni intuu uga baxay soo xabadeeyay. Dagaal ayaa goobtii ka dhacay uu isagii ku dhintay, qaar kale oo shacbkii goobta joogay ay ka mid yihiina ay ku dhaawacmeen. Dhacdadaa sidee loo soo gaadhsiiyay qaar ka mid ah eheladii ninkaa ku dhintay dagaalka uu isaga abaabulay. Xafiiska Ku-Tiri Ku-teen markii loo sheegay dhacdadaa isla markiiba wuxuu ka fikiray habkii looga faa’idaysan lahaa. Habka loo dhisay flimka;
1- in laga raadiyo aaga uu ka soo jeedo qaraabadii ninka la dilay qaar ka mid ah.
2- in loo dhiso sida la rabo in loo gaadhsiiyo dadweynaha ku nool dibadda.
3- in loo diyaariyo meelaha ay teleefoonada u dirayaan.
Waxaa ka mid ahaa gabadh nagala soo xidhiidhay dhacdadaa. Waxay tidhi; Hooyaday oo aan waligeed been sheegin ayaa iiga warantay. Oo tidhi; Tuulada intay soo galeen ONLF-tii ayay dadkii oon ka warheynin xabad ku fureen dad badanoo uu ka mid yahay Hebel ayaa ku dhintay goobtii, qaar kale oy ka mid tahay eedadaa Heblana waa dhaawac. Dhamaad.
Dabeecadaha dadka iyo siyaabaha ay Ku-tiri Ku-teenta u faafto waa mid ku dhisan is-dhaln rog warkii hore iyo ka sii badbadin. Haduu ahaa markii hore Hebel ayay dileen maalma ka dib wuxuu noqonayaa dad badan ayay ku laayeen tuulada. Dagaalkan dacaayadda madaw ah ee gumaysiga uu isticmaalo kuma koobna un sheekada noocaa ah. Waxaa kaloo ka mid ah in dadka Jigjiga taga markay soo noqonayaan la soo qabadsiiyo warka laga doonayo inay dadka u sheegaan iyo waliba habka ay u sheegayaan.
Tusaale yar hadaan ka bixino. Nin taageere halgan ahaa ayaa ka dagay Adisababa ka dibna uga sii gudbay Jigjiga isagoo leh mashruuc ayaan rabaa inaan ka fulino Itobiya. Bilo ka dib ayuu soo noqday. Maadaama uu ahaa nin lagu ogsoonaa inuu yahay taageere halgan, wuxuu dalbaday inuu si gaar ah ula kulmo qaar ka mid ah xubnaha jooga magaalada uu yimid isagoo leh waxaan rabaa inaan si hoose isu wareysano. Sidii uu dalbaday ayaa loo yeelay. Waxaa loo soo dhiibay warar goosgoos ah oo ujeeda leh hasa ahaatee u dhigan habka loo yaqaano Yes – But ( Haa – Laakiin). Waxaa ka mid ahaa hadaladiisa; Dadweynaha 100% waxay taageersan yihiin ONLF – laakiin …, Waxaan socdaal ku tagay halkaa – Laakiin …, Ciidanka jabahadda waa sidaa – Laakiin. Sheeko intii dhagaysanaysay ay si dhibyar u fahmeen ujeedada ka dambaysa, isagiina uu ku fashilmay markuu ka jawaabi kari waayey su’aalaha la weydiiyay.
Hasa ahaatee fadhigaa wuxuu ahaa midkuu sida gaarka ah u dalbaday oo uu kula kulmay xubna urur oo la socda xaaladda halganka gude iyo dibadba, fahmina kara ujeedada ka dambaysa hadalada gumaysiga uu soo dhoofinayo. Waxaana hubaal ah inuu dad badan oo warmooge ah ku shubay wixii loo soo dhiibay.
Ugu dambayn in la fahmo hadalada ku-tiri Ku-teenta ah ee sirdoonka Itobiya uu faafinayo waa lagama maarmaan isla markaana loo fasiro dadweynaha, lalana socodsiiyo xogta dhabta ah iyo dhacdooyinka uu dhalan rogayo gumaysiga.